इन्टरनेटको लतबाट कसरी जाेगिने? इन्टरनेटको लतले पारेको सामाजिक तथा मानसिक प्रभाव अध्ययन गरी आवश्यक नीति बनाउन जरुरी भइसकेको छ।
अनलाइन हिंसामा महिला राजनीतिकर्मी हाम्रो अध्ययनमा कुल २४३ वटा स्त्रीद्वेषी सामग्री फेला परे। तिनमा सबैभन्दा बढी २३५ वटा सामग्री सामाजिक सञ्जालमा, ६ वटा पत्रपत्रिकामा र दुई वटा अनलाइनमा भेटिएका थिए।
विद्यालयमै मिडिया साक्षरता मिडिया साक्षरताले सुसज्जित विद्यार्थीले समाजका वर्चस्वशाली विचारधारा र भाष्यहरूलाई चुनौती दिँदै आफ्नै वैकल्पिक मिडिया सिर्जना गर्न सक्छन्।
जलवायु परिवर्तन विरुद्धको पहलमा आधा आकाश थाम्दै जलवायु परिवर्तनका प्रभाव अनुकूलनमा नेपाली महिलाको संलग्नता अपरिहार्य छ।
पत्रकारिताले समेट्न नसकेको सङ्घीयता पत्रकारहरू सरकारको प्रचार अधिकृत बनेर उसैको महिमागानमा खटिंदा आवश्यकै नभएका ठाउँमा बाटो बनाइएका, सडक फराकिलो पार्ने नाममा पहाड चिथोरिएका घटनाले ठाउँ पाएनन्।
इन्टरनेटमा हामी कति सुरक्षित? सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने क्रममा केकस्ता वैयक्तिक विवरण डिजिटल कम्पनीलाई दिन मन्जुरी गरिंदै छ र यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्नेमा पनि जागरुक हुनैपर्छ।